म्याग्दीबाट ७ दिन हिँडेर काठमाडौं फर्किँदै गरेका वृद्धको मुटु हल्लाउने कहानी ! | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार म्याग्दीबाट ७ दिन हिँडेर काठमाडौं फर्किँदै गरेका वृद्धको मुटु हल्लाउने कहानी !
म्याग्दीबाट ७ दिन हिँडेर काठमाडौं फर्किँदै गरेका वृद्धको मुटु हल्लाउने कहानी !
२०७७, ३ बैशाख बुधबार १८:५५
रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीनजिकै रहेको सोमवारे हटियाका ६३ वर्षीय भीमबहादुर लामा कामको शिलशिलामा दुई महिनाअघि घरबाट निस्किन लाग्दा ८७ वर्षिया आमाले भनेकी थिइन्, ‘त्यति टाढा नगए हुन्न बाबु ? यता नजिकै काम पाइन्न ? उमेरले पनि नसक्ने भइसकिस्।’
कमाएको पैसा ठेकेदारले ‘उतै तिम्रो घरमा दिन्छु भनेकाले’ आफूले बुझन् नपाएको उनको भनाइ छ । आफूले पाउने पैसा साहुले सोझै घरका सदस्यलाई दिएको हुनुपर्ने उनको विश्वास छ ।आफूसँग भएको अलिकति पैसाले जेनतेन खान पुग्ला कि भन्ने उनको अनुमान पनि फेल खाइसकेको छ । पोखरामा बास बस्दा आफूसँग भएको पैसा सकिइसकेको उनले दुःख सुनाए ।
मंगलवार घाम डुब्ने बेलामा काठमाडौंको खाल्डोमा प्रवेश गरेका उनलाई अब भने घर पुगिने आशा पलाएको छ । उनी मंगलवार राति भक्तपुरको जगातितिरको प्रतिक्षालयमा बास बस्ने योजनामा थिए । म्याग्दीको दरवाङमा चाहिँ उनले विद्यालय भवन बनाउने काम पाएका थिए ।
तेस्रो दिन बिहान ५ बजेतिर उठेर एक्लै हिँड्न थाले । लगातार दुई दिनको हिँडाइले ज्यान गलिसकेको थियो । दिउँसो घाममा आराम गर्दै हिँडें । सडकमा ट्रक र एम्बुलेन्स गुडेका थिए । ठ्याक्कै त कसरी भन्न सक्नु । तर मैले ७०/८० ट्रक र एम्बुलेन्सलाई रोक्नुस् भनेर इशारा गरें । अहँ, कसैले रोकेनन् । त्रिशूली नदीलाई हेर्दैहेर्दै म हिडें । त्यो दिन राति म घाटबेसीमा आइपुगें।
आज बिहान मच्छेटारबाट हिँडेको घाम अस्ताउने बेला काठमाडौं आइपुगें । आज राति भक्तपुरमा बास हुन्छ होला । अघि नागढुंगामा प्रहरीले रोक्यो । बेकारमा मलाई दुई घण्टा नागढुंगामा रोक्यो । मेरो हिँड्ने ट्याम (समय) खेर गयो । नत्र म अहिले कलंकी पुगिसकेको हुन्थें । भोलि (आज बुधवार) भक्तपुरबाट काभ्रे कटेर झाँगाझोलीसम्म पुग्न सक्छु कि भन्ने लागेको छ । त्यसपछि पर्सि (बिहीवार) म खाल्डेबाट झोलुंगे पुल तरेर पुरानो बाटो हुँदै मन्थली लाग्छु ।
Source: यो खवर हेर्न लोकप्रिय अनलाइन lokaantar.com जानुहोला
Previous articleम्याग्दीमा १ सय ३० जनाको र्‍यापिड टेष्ट नै नेगेटिभ
Next articleताराखोलाबाट बालबालिकासँगै बरंजा प्रवेश गरेका महिलालाई फिर्ता पठाइयो